Ifulethi / Amagumbi il Poderone IL GRANAIO - I-Airbnb
Ifulethi / Amagumbi il Poderone IL GRANAIO
I-Il Poderone yindlu yasefama yase-Umbrian yenkulungwane ye-19 eyakhiwe kwilitye lechibi lendawo, yalungiswa ngokubhekisele kumoya wokuqala ngumnini, uGiuseppina, ohlala kwelinye lamagumbi. Amanye amagumbi endlwini anikezelwe kwiindwendwe, zonke zinekhitshi / igumbi lokuhlala, amagumbi okulala, igumbi lokuhlambela.
Umgangatho wesibini kwindlu yefama yase-Umbrian yakha ngamatye echibi lendawo.
Indlu isandula ukulungiswa kwaye ihonjiswe ngobumnandi, kubandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala kunye namagumbi amabini okulala.
Ngaphandle uya kufumana igadi ekhuselweyo enendawo yokuhlala ukuze uyonwabele.
Kukho neebhayisekile ezintathu zeendwendwe.
Kwipropathi kukho indawo yokupaka ekhuselekileyo yabucala.
I-villa ikwi-50 yeemitha ukusuka kwiLake Trasimeno kunye nokuhamba okufutshane ukuya embindini weSan Feliciano apho unokufumana zonke iinkonzo zakho ezibalulekileyo kunye nesikhephe esiya ePolvese Island.
I-Parugia, ikomkhulu lase-Umbria, ikumgama oziikhilomitha ezingama-28 kuphela, iRoma malunga ne-200km kunye neFlorence i-150km, isenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokuhlola i-Umbria kunye neTuscany, eItali eyona ndawo intle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Feliciano, Magione